9th December 2018, 07:27 pm | २३ मंसिर २०७५
यसअघि डिएनए म्याच नभएपछि छुटेका दीलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि प्रहरीले यस्तै 'प्लट' तयार पारेको थियो। त्यस क्रममा पनि विष्टले निर्मलाको साइकलको चेन बनाइदिएको र त्यस क्रममा उत्तेजित भई खोलापारी लगेर बलात्कार गरेको भनिएको थियो।
त्यसैगरी रावलले पनि आफन्त बलात्कार गरिसकेको प्रहरी अनुसन्धानका खुलेको भन्दै प्लट तयार पारिएको छ। यसअघि दीलिपसिंह विष्टको पनि यस्तै आफन्त बलात्कार गरिसकेको 'प्लट' प्रहरीले बुनेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी कृष्णराज ओझाले पनि विशाललाई साउन १० गते नियन्त्रणमा लिएको स्वीकारे। डिएसपी ‌ओझाले भने, ’साउन १० गते साँझ करिब ५ बजेदेखि ६ बजेको बीचमा हाम्रो टोलीले नियन्त्रणमा लिएको देखियो। भोलिपल्ट आमा आएर दिउँसोतिर घर लगेको बुझिएको छ।'
तर प्रहरीसँग अभियुक्त खडा गर्न खासै प्रमाण भने भएको देखिँदैन। निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा पुरुष डिएनए भेटिसकेको हुनाले जस्तै विश्वसनीय देखिने 'प्लट' बनाए पनि डिएनए नमिल्दासम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।
तर थाइल्यान्डमा बसेर एसियन नेटवर्क अफ पिपल हु युज ड्रग्स संस्थामा नेपालसहितको क्षेत्रीय कार्यक्रम हेर्ने गरी काम गरिरहेका राजीव काफ्ले प्रश्न गर्छन् - 'भायग्रा खाएको हो र यौन उत्तेजना बढ्नलाई?'
नेपालमा प्रयोग हुने लागू औषध भनेको सीमापारबाट आउने र इन्जेक्सनबाट लगाउने टिडिजेसिक, पेनकिलर फार्मेस्युटिकल ड्रग्स हुने जानकारी दिँदै काफ्लेले भने, 'यस्तो लागूऔषधले डिसिजन मेकिङमा असर पारेर बलात्कारै गराउँछ भन्ने हुँदैन। जाँड रक्सीले भने हुनसक्छ।'
त्यसलगत्तै उस्तै शैलिमा निर्मलाको फोटो राखेर 'सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन' लेखिएका पोस्टर काठमाडौँमा देखा परे। लाख बढी सदस्य भएको केटाहरुकोको लोकप्रिय फेसबुक क्लोज ग्रुप मेन्स रुम रिलोडेड (एमआरआर) मा उस्तै डिजाइनका पोस्टर देशभर आफैले छापेर आफै टाँस्न आह्वान भयो गुगल ड्राइभमा डिजाइनको लिङ्क सेयर गर्दै।
मंसिर २० गते सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले 'निर्मलाका प्रकरणका अपराधी पत्ता लागेको दिन सरकार भेटिन्छ' भन्दै अपराधी सार्वजनिक हुन लागेको संकेत दिए।
यसअघि पनि केही युवक पक्राउ गरी डिएनए नमिलेपछि छोडिएका थिए। ती व्यक्ति को थिए? कहीँ कतै समाचार आएन। प्रहरीले उनीहरूको नाम गोप्य राख्यो। तर अहिले शङ्काको भरमा नै अभियुक्तको नाम समेत किन प्रहरीले 'लिक' गरायो?